Horaa loo celin waayay isagoo xiran kabo caadi ah bal ka waran marka uu kabahan soo xirto Final ka Champions League…(Cristiano Ronaldo oo kabo cusub ku ciyaaraya) – Gool FM
(Madrid) 18 Maajo 2016. Malaha haddii uu Ronaldo ku ciyaaro xitaa cago caddaan 30-gool wuu dhalin karaa xilli ciyaareedkii, laakiin ka waran haddii uu kabo cusub oo si wayn loo soo dhaqshadeeyay ku ciyaarayo maxaa laga filan karaa.
Kabtanka xulka Purtugal ayaa finalka Champions League ee 28-ka bishan ka dhici doona Milano kala hortagi doona Atletico Madrid kabo cusub oo ay u soo dhaqshadeysay NIKE kuwaa oo xitaa loo arkay mid ka mid ah kabihii ugu hufnaa ebid.
Kabaha cusub ee Ronaldo Nike Mercurial Superfly waxaa nuucooda oo kale ku ciyaaray Alexis Sanchez intii lagu guda jiray Copa America ee uu xulkiisa Chile ku guuleystay.
Isla maalinka la ciyaarayo final ka Champions League 28-ka bishan ayaa kabahan cusub iyana la suuq geyn doonaa.
Haddaba Ronaldo isna isagoo xiran kabahan maku guuleysan doonaaa Champions League???
Liverpool oo midabka cas u badashay 'BASEL" [Daawo Sawiradda]